ओली-सापकोटा टकरावले तनाव | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← एमसीसी सम्झौता तत्काल अघि नबढ्ने !
दाहाल पटक-पटक किन दिन्छन् माओवादी विघटनको धम्की ? →
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा बैठकमा पछिल्ला दिन जे–जस्ता दृश्य देखिएका छन्, यी वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका उपज मात्रै होइनन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको असर पनि अहिले संसद्मा देखिएको छ । बुधबार र शुक्रबार एमालेको अवरोधकै बीच बैठक सञ्चालन गरेका सभामुख सापकोटाले आइतबार भने अवरोध अवलोकन गर्दै बैठक भदौ २९ सम्मका लागि स्थगित गरेका छन् । सभामुख चयनदेखि जारी संसद् अधिवेशनसम्म आइपुग्दा सापकोटा र ओलीबीच सुमधुर र स्वाभाविक सम्बन्ध कहिल्यै देखिएन । एक महिलासँगको विवादित सम्बन्धलाई लिएर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा गरेपछि सभामुखमा ओलीले सुवास नेम्वाङ वा शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई पठाउन खोजेका थिए । तर तत्कालीन नेकपाको शक्ति सन्तुलन र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अडानका कारण ओलीले सापकोटालाई रोक्न सकेनन् । ओली र सापकोटाबीच असमझदारी सभामुख चयनको गर्भबाटै जन्मिएको हो, एमाले प्रतिपक्षमा गएपछि विवाद हुर्कंदो छ ।
संविधान, कानुन बुझ्नेभन्दा राजनीतिमा मात्रै लागेको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउँदा पनि विवाद आउने गरेको गुरुङको बुझाइ छ । ‘मैले दमननाथ ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट र सुवास नेम्वाङसँग काम गरें, यी चार जनामा सबैभन्दा विवादित रामचन्द पौडेल रहनुभयो,’ गुरुङले भने, ‘’cause उहाँ कानुनको विद्यार्थी पनि होइन । केवल राजनीतिमा लागेको मात्रै हुनुभयो । उहाँलाई त्यतिबेला पदअनुकूल आचरण नगरेको भनेर हटाउन महाअभियोग प्रस्ताव आएको थियो तर त्यो पारित हुन सकेन ।’(कान्तिपुर )